के हो ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि ?-Setoghar
के हो ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि ?
डा. शोभा मारिखु,
डा. शोभा मारिखु, स्त्री रोग विशेषज्ञ
पछिल्लो समय डाइग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लामो समयसम्म महिलाको पेट दुखेको समस्या पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा यो विधिबाट धेरैले सेवा पाउन थालेका छन् । अल्ट्रासाउण्ड गर्दा समेत समस्या पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा डाइग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपीबाट रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
ल्याप्रोस्कोपी भनेको रोगको प्रविधि पत्ता लगाउने र पत्ता लगाएसँगै त्यसको समाधान पनि गर्ने प्रविधि हो । यसमा नाइटो मुनि सानो प्वाल पारेर पेट भित्र दुर्बिन छिराएर त्यहाँ भएकोे समस्याको हेर्ने काम गरिन्छ । यस प्रविधिबाट पेटभित्र रहेको समस्या पत्ता लगाएसँगै शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ ।
ल्याप्रोस्कोपी कस्तो अवस्थामा गर्ने ?
महिलाको पेटको समस्याहरु जस्तै तल्लो पेट दुखिरहने, दुखाई कम गर्ने औषधि सेवन गर्दा ठिक हुने र पछि फेरी दुखाई सुरु हुने, क्रोनिक पेल्भीक पेन भएका बिरामीलाई डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी गरेर जाँच गरिन्छ । महिलाहरुको यस्तो समस्यामा भिडियो एक्स–रे गर्दा कुनै समस्या नदेखिने, रगत, पिसाव जाँच गर्दा पनि पत्ता नलाग्ने, रिर्पोट सामान्य आउने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा डाइग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी गरिएमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । सानो दुर्बिन पठाएर पाठेघरमा मासु पलाएको, पाठेघरको बनावट, पाठेघर फुलेको, अण्डाकोषमा मासु पलाएको, पानी वा रगत जमेको ल्यापारोष्कोपिक प्रविधिबाट निकाल्न सकिन्छ ।
इन्डोमेट्रियोसीस् रोगका कारण पेट दुखाईमा औषधि सेवन गर्दा समेत निको हुँदैन । लामो समय सम्म दुख्ने, यौन सम्पर्क गर्दा दुख्ने, दिशा गर्दा दुख्ने, महिनावारीमा हुने समस्यामा फाइदा हुन्छ । यस्तो समस्या अल्ट्रासाउण्डमा देखिदैन जसका लागि ल्याप्रोस्कोपी नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँझोपनाका समस्यामा पनि यो विधि लाभदायक मानिन्छ । किनभने यसबाट पाठेघरको बनावट, ओभरी सामान्य छ-छैन देखिनुको साथै पाठेघर सानो भएको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यसबाट क्रोमोट्युवेसन पनि गर्न सकन्छि । पाठेघरका मिथालिन व्लु भन्ने औषधि पठाइन्छ । जसको माध्यमबाट ट्युवहरु खुला छ÷छैन जाँच गर्न सकिन्छ । यसको साहायताले कतै अवरोध भएका पनि ट्युव खुल्न जान्छ ।
डाइग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपीका लागी पनि जनरल एनेथेसिया दिएर वेहोस बनाएर नै गर्नु पर्ने हुन्छ । नाइटो मुनी सानो प्वाल पारेर त्यसबाट सर्वप्रथम पेटमा कार्वनडाइअक्साइड पठाईन्छ । जसले पेट फुल्न जान्छ । त्यसपछि त्यहाँबाट दुर्बिन छिराइन्छ । यसको साथै अरु २ वटा प्वाल पारेर त्यसबाट शल्यक्रियाका लागि आवस्यक साना साना इन्ष्ट्रमेन्ट पठाइन्छ । साथै डिम्बको अवस्था, ट्युवको अवस्था हेरेर शल्यक्रिया गरिन्छ ।
पहिला पेटमा भएको समस्याहरुको लागि पेटमा ठूलो घाउ बनाएर शल्यक्रिया गर्नु पर्ने अवस्था रहेको थियो । यसरी शल्यक्रिया गर्दा सीमित क्षेत्रमा मात्र हेर्न सकिन्थ्यो भने ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिमा पेट भित्रको सम्पूर्ण समस्याको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी शल्यक्रिया गर्दा घाउ सानो हुने हुँदा दुखाई पनि कम हुनुको साथै एन्टिवायोटिकको र अन्य औषधी समेत कम गर्न सकिन्छ ।
ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्दा अस्पतालमा धेरै बस्नु पर्दैन । यो प्रविधि महङ्गो भएपनि धेरै बिरामीले यसको सदुपयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई सस्तो भन्दा सस्तोमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
डा.शोभा मारिखु इवामुरा अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन् ।